Ciidamada Burundi oo faarujiyay Saldhigyadii ay uga sugnaayeen degmada Warsheekh Ee Sh/dhexe.
Thursday September 05, 2019 - 13:46:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Taliska ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu ay faarujiyeen degmada Warsheekh ee dhacda xeebta gobolka Shabeellaha dhexe.
Boqolaal katirsan ciidamada Burundi ayaa faarujiyay saldhigyadii ay ku lahaayeen gudaha iyo hareeraha degmada Warsheekh oo qiyaastii 65Km ujirta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Taliye ku xigeenka howlgallada AMISOM ninka lagu magacaabo Jenaraal James Nakibus Lakara oo ka hadlay ka bixitaanka ciidamada Burundi ee degmada Warsheekh ayaa sheegay in uu qeyb ka yahay qorshaha AMISOM looga saarayo dalka Soomaaliya marka lagaaro sanadda 2021 ee loo yaqaan (FOB).
Taliyaha ciidamada Burundi ee duullanka ku jooga gobolka Sh/dhexe ayaa isna sheegay in ka bixitaanka ciidamadooda degmada Warsheekh ay ka dhigayso saldhiggii sedaxaad oo ay ka baxaan waxayna horay uga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Jaamacadda Umadda iyo Kuliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada muqdisho.
Balse Taliyahan wuxuu is hilmaamsiiyay in ciidamada Burundi lagu qasbay in ay isaga firxadaan saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaannada Leego iyo Cali Fooldheere oo kawada tirsan labada Shabeelle.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle oo isna ka hadlay ka bixitaanka ciidamada Burundi ee degmada Warsheekh ayaa sheegay in wax saameyn dhanka amniga ah aysan ku yeelan doonin maamulkooda oo ciidamo Boolis ah geeyay saldhigyadii ay faarujiyeen ciidamada shisheeye.